Lafta gareen oo ku faanay inuu horumar sameeyay maamulkiisa mudada halka sano ah uu jiro | Xaysimo
Home War Lafta gareen oo ku faanay inuu horumar sameeyay maamulkiisa mudada halka sano...
Lafta gareen oo ku faanay inuu horumar sameeyay maamulkiisa mudada halka sano ah uu jiro
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa sheegay in Maamulka Koonfur Galbeed uu ku tallaabsaday sanadkii uu joogay horumar ballaaraan,isla markaana ay jiraan dowlado taageero Cusub u balan qaaday.
Waxaa uu sheegay in safar uu dhawaan ku tegay dalka Jabuuti loo balan qaaday in dowladda Jabuuti ay ka qeyb qaadan doonto qalabeynta iyo Dhismaha Isbitaalka Magaalada Marka iyo dekadda degmada Baraawe oo ah Xarunta rasmiga ah ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Sidoo kale Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray inay jiraan dad ka naxayo oo aan jecleen horumarka Reer Koonfur Galbeed, hayeeshee dadkaasi aan dheg jalaq loo siin doonin sida uu hadalka u dhigay.
“Dadka horumarka iyo dowladnimada koonfur Galbeed ka naxaayo waan ognahay loomana joogsan doonin, dalkaan iyo dadkaana waxaa ay xaq u leeyihiin oo ah Ganacsi iyo Amni ay heli doonaan ayuu yiri Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Hadalka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli ay jiraan dad dhaliilsan siyaasada uu ku Shaqeeyo Maamulkaas, kuwaas oo u badan taageerayaasha Muqtaar Roobow oo kamid ahaa musharixiintii Koonfur Galbeed balse haatan u xiran dowladda Soomaaliya.
Siday gabadhan u dhashay iyadoon uur isku ogayn?
Mareykanka: Putin ayaan beegsan doonaa hadii uu Ukraine weerar ku qaado
Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo aqbalay dalab horey uga yimid...
Ciidamada Gorgor iyo Haramcad oo Beledweyne loo qaaday
Wasiir Bayle: Sababtan ayaan ku waayay kursiga xildhibaanimada?
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed oo ka dagay magaalada Jigjiga